२५ अाैं दिनमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षबीच वार्ता, यस्तो भयो सहमति (विज्ञप्तीसहित) | जनदिशा
२५ अाैं दिनमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षबीच वार्ता, यस्तो भयो सहमति (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच मंगलबार साँझ भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको छ ।
केसी र सरकारी वार्ता टोलीले साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मध्ये अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि केही बुँदामा अझै सहमति हुन नसकेको जनाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने छन् ।
यसैगरी, डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्री, डा. अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डे सहभागि थिए । याे खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
Previous Previous post: धावनमार्गको कालोपत्रे भत्किएपछि जहाज उडान/अवतरणमा समस्या
Next Next post: सर्वोच्चले तीनै तहका अदालतहरुकोे आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक ग¥यो